23 / 05 / 2021 23 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 240 Views စာ0မှတ်ချက် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, ဝက်ဝံ, နတ်သမီးပုံပြင်, Goldilocks နှင့်သုံးဝက်ဝံ, Lego, Lego ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, LGBTQ +, LGBTQIA +, ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, Snapchat
အတွက်တတိယဗီဒီယို Lego Group ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနတ်သမီးပုံပြင်သစ်များကိုအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ၎င်းသည်မှန်ကန်သည်။
Stop-motion ၏စုဆောင်းမှုသို့ယခင် entries များကမ္ဘာ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအုတ်မြစ်များပါဝင်သည် Hansel နှင့် Gretel နှင့်အခြားအဘို့ နည်းနည်းအနီစီးနင်းပါးပျဉ်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုတ reimagines classic ခေတ်သစ်နှင့်အတူပုံပြင် Lego လှည့်ကွက်။ ဤဖြစ်စဉ်တွင် titular သုံးဝက်ဝံအားလုံးသည်ရပ်ကွက်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီးသစ်တောအတွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော Goldilocks ကိုတက်ကြွစွာလိုက်ရှာကြသည်။
အောက်မှာပြထားတဲ့ဗွီဒီယိုအပြည့်အစုံကိုမင်းကြည့်လို့ရတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်သာလိုတယ်။ အရစ်ကျတစ်ခုချင်းစီသည်သောကြာနေ့တိုင်းကျဆင်းနေပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်မည်မျှကျန်သေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်သာလိုအပ်သည်။
အဆိုပါလိမ်အတွက်တည်ဆောက် Lego ဒီဇာတ်လမ်းက Miniligigure အတိုင်းအတာမဟုတ်တဲ့ပရိဘောဂပုံစံအချို့ကိုပြသနေတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းကစိတ်ကူးတွေကိုဆက်လက်စွဲမြဲနေစေပါတယ်။ ဗီဒီယိုသည်အသေးစားဓာတ်ပုံများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောရုပ်ပုံများဖြင့်ရပ်တန့်သည့်လှုပ်ရှားမှုကာတွန်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုဥပမာကောင်းပေးသည်။
သတိပြုသင့်တာကတော့ဒီဝက်ဝံကြီးနှစ်ခုကလိင်တူစုံတွဲတွေဖြစ်ပြီး LGBTQIA + ကိုယ်စားပြုမှုပိုမိုရရှိရန် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ။ သင်ပိုမိုဖတ်နိုင်သည် Lego အုပ်စုအသစ်နှင့်မတူကွဲပြားသောအစုံ ဒီမှာ.
Rebuild the World လှုပ်ရှားမှုသည်ဤဗီဒီယိုများနှင့်မကြာသေးမီကအသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာခြင်းနှင့်အတူရပ်တန့်ခြင်းလက္ခဏာမပြပါ Snapchat မှန်ဘီလူး အသုံးပြုသူမျိုးစုံကိုအတူတကွမော်ဒယ်တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
← Lego Friends နွေရာသီ 2021 မော်ဒယ်များယခု LEGO.com အပေါ်စာရင်းဝင်
Lego ကိုငါတို့မြင်ရမလား Star Wars: နွေရာသီဂိမ်းပွဲတော်တွင် Skywalker Saga? →